Home > Ngwaahịa > Ngwa ịsa ahụ
Ngwa ịsa ahụ Ndị nrụpụta
Ngwa ịsa ahụ anyị gụnyere akwa mgbidi, nkewa mmiri, ogwe aka ịsa ahụ, ogwe osisi ịsa ahụ, na braket ịsa ahụ. Ngwa ndị anyị na-eji bụ CHIMEI niile, nke bụ otu n'ime ụlọ ọrụ 500 kacha elu na China, anyị na-ejikwa chrome plating maka ọgwụgwọ elu. Ngwa anyị niile nwere ike ịre iche. Ndị ahịa ga-azụta dịka ahịa mpaghara si dị.
Ejiri igwe ntụtụ rọba na-achịkwa kọmpụta ọhụrụ; Sistemụ nnwale ọkaibe na igwe nkwakọ ngwaahịa ọnya dị mma, anyị nwere ike ịnye gị ngwa ịsa ahụ dị mma dị ka achọrọ. Banyere nkwakọ ngwaahịa, anyị dị mma na nkwakọ ngwaahịa blister na igbe agba, n'ezie, anyị nwere ike ịnye ụfọdụ nkwakọ pụrụ iche ma ọ bụrụ na ndị ahịa nwere ọchịchọ. Dị ka onye nrụpụta, anyị nwere ebe a na-akpụzi anyị, ndị injinia nwere ahụmahụ dị njikere ime mgbanwe mgbanwe ọ bụla nke ị rịọrọ n'oge dị ngwa.
Zụrụ ngwaahịa sitere na ụlọ ọrụ anyị a na-akpọ Huanyu Sanitary Ware bụ otu n'ime ndị na-emepụta ihe na ndị na-ebuga Ngwa ịsa ahụ na china. Ogo anyị dị elu Ngwa ịsa ahụ na-ewu ewu na ndị chọrọ inweta ngwa ahịa dị ọnụ ala. Anyị nwere ọtụtụ ngwaahịa iji nye ọrụ n'ogbe. Ị nwere ike ijide n'aka ịzụta ọnụ ala dị ala site na ụlọ ọrụ anyị.